नेपाली बेकह्याम | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सहमतिबिना संसद् अधिवेशन डाकियो / माओवादी भन्छ ‘चल्नै दिन्नौं’
९ सय ९९ मा मोबाईल सेट →
Posted on 29/06/2010 by शिव पौडेल | १ टिप्पणी
स्टाइलिस फुटबल खेलाडी अन्जन केसीका फ्यानहरू उनलाई नेपालका डेभिड बेकह्याम भन्ने गर्छन् । अन्जनलाई बेक्ह्याम को हुन् र आफू को हुँ भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर, फ्यानहरूले बेकह्याम भनिदिँदा उनलाई आनन्द भने आउँछ ।
अन्जन केसी, फुटबल खेलाडी
अन्जन केसी अर्थात् स्टाइलिस फुटबलर । थ्री स्टार क्लबका अन्जनलाई उनका फ्यानले मन पराउने कारण हो- उनको खेल र लवाइमा देखिने स्टाइलिसनेस । उनलाई सबभन्दा मन पर्ने खेलाडी हुन्- इंग्ल्यान्डका डेभिड बेकह्याम । ‘बेकह्याम एकदम पर्फेक्ट प्लेयर हुन्,’ उनले भने, ‘मैदानमा उत्रेपछि केही न केही जादू गरेरै छाड्छन् । फुटबलबाहेकको जिन्दगीमा पनि उनी रंगिन छन् । मोडेलिङमा पनि उनी मज्जाले चम्किएका छन् ।’ अन्जनलाई उनका फ्यान नेपालको डेभिड बेकह्याम भन्ने गर्छन् । बेकह्यामजस्तै उनी पनि आकर्षक फ्रि-किक हान्न सिपालु छन् । तर, अन्जन आफू र बेकह्यामबीचको अन्तर राम्ररी बुझ्छन् । भन्छन्, ‘कहाँ डेभिड बेकह्याम, कहाँ म ? तथापि, फ्यानहरूले बेकह्याम भनिदिँदा मज्जाचाहिँ लाग्छ ।’
वि.सं. ०६२ मा राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न थालेका अन्जन अहिले नेपालमा फुटबल खेलेर खान पुग्ने अवस्था छ, भन्छन् । ‘खेल्न सकुन्जेल सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खेल-जीवन सकिएपछि चाहिँ भन्न सकिन्न ।’ उनको आग्रह छ- नेपालको फुटबलको स्तर’bout कुरा गर्दा यस क्षेत्रमा भएको ज्यादै न्यून लगानी पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘सबभन्दा पहिले खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित होस्, फुटबलको स्तर आफैँ उकासिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
लेफ्ट ब्याक पोजिसनबाट खेल्ने अन्जन मैदानभित्र छिरेपछि बलमा मात्रै ध्यान दिने बताउँछन् । ‘विपक्षी स्ट्राइकरहरूले एक्सन गरेपछि हाम्रो रियाक्सन सुरु हुन्छ,’ उनी आफ्नो कामको प्रकृतिलाई घतलाग्दो पारामा बयान गर्छन्, ‘त्यसैले मैदानमा बलबाहेक अरू केही सोचिँदैन । कति दर्शक आएका छन् या कति चर्का हुटिङ् गरेका छन्, यस्ता कुरा केही पनि सोचिँदैन । बलबाहेक अरू कुरामा ध्यान दिइयो भने त विपक्षीले वित्यास पारिहाल्छन् नि !’
हरि खड्का र वसन्त थापा उनलाई मन पर्ने नेपाली खेलाडी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीमा इंग्ल्यान्डका असी कोल र स्पेनका जावी उनलाई मन पर्छन् । डेभिड बेकह्यामका त उनी डाई हार्ड फ्यान भइहाले ।
आफ्नो क्यारियरमा उनले बिर्सनै नसक्ने घटना भनेको वल्र्डकप क्वालिफाइङमा ओमानसँग खेल्दा हो । ओमानले नेपाललाई खेलेपिच्छे नराम्ररी धराशयी बनाइदिन्थ्यो । दुईवटा वल्र्डकप क्वालिफाइङ म्याचमा ओमानले एउटामा सात गोल र अर्कामा आठ गोल गरेर नेपाललाई मरणासन्न पारिदिएको थियो । यस्तो कटु यथार्थबीच अन्जनहरू ओमानविरुद्ध वल्र्डकप क्वालिफाइङ खेल्न गएका थिए । प्रशिक्षणअवधिभर खेलाडीलाई एउटै कुरामा खबरदारी गरिएको थियो- कुनै पनि हालतमा धेरै गोल नखाने । जित्न सम्भव नभएपछि सम्मानजनक ढंगले हार्ने कोसिस न हुन्छ ! त्रिभुवन अन्तर्राष्रिय विमानस्थल छाडेदेखि नै नेपाली खेलाडी दबाबमा थिए- एनिहाऊ, कम गोल खाऊ ! ‘ओमान पुगेपछि हामी झन् बढी प्रेसरमा थियौँ,’ अन्जन सम्भिन्छन्, ‘तर, हामीले राम्रै खेल्यौँ र दुई गोल मात्रै खायौँ । हामी हारेर दुःखी भएका थिएनौँ, बरु थोरै गोल खाएर खुसी थियौँ ।’
अन्जनका त्यति ठूला महत्त्वाकांक्षा छैनन् । ‘बस्, एउटा सक्षम र सवल फुटबलर बन्न पाइयोस्,’ उनी आफ्नो सरल आकांक्षा व्यक्त गर्छन् । पार्टी र घुमफिरमा सोखिन अन्जन रंगिन मनमिजासका मान्छे हुन् । २६ वर्षीय यी स्टाइलिस खेलाडीलाई महिला फ्यानहरूले फोन गरेर हैरानै पार्छन् रे ! तर, गर्लफ्रेन्ड’bout कुरा उप्काउँदा उनी भनिहाल्छन्, ‘गर्लफ्रेन्डको चाहिँ कुरै नगरौँ है !’
अहिले प्रशिक्षणमा र वल्र्डकपको भरपूर स्वाद लिन व्यस्त छन्, अन्जन । यसपालिको वल्र्डकपका अहिलेसम्मका म्याचमा उनलाई सबभन्दा भव्य लागेको जापानी खेलाडी केसुके होन्डाको फ्रि-किक गोल हो । यी फ्रि-किक पारखी भन्छन्, ‘होन्डाको त्यो फ्रि-किक विश्व फुटबल इतिहासमै फस्र्ट क्लास फ्रि-किक हो ।’
अहिले नेपाली फुटबलप्रेमी हरेकका ओठमा झुन्डिएको प्रश्न हो- नेपालले कहिले वल्र्डकप खेल्ला ?’ अन्जनलाई पनि यही प्रश्न राखिन्छ । उनी लामो सास फेर्छन् र भन्छन्, ‘यस्तै परिस्थिति रहने हो र फुटबलको विकासक्रम यस्तै सुस्त हुने हो भने नेपालले वल्र्डकप’bout सोच्दै नसोचे हुन्छ ।’
नेपालले वल्र्डकप खेल्ने हो भने के गर्नुपर्ला त ? नेपाली फुटबलका दिग्गज खेलाडीदेखि भयंकर पण्डितहरूसँग पनि यस सवालको स्पष्ट जवाफ नहुन सक्छ । अन्जनसँग पनि छैन । तर, उनी यतिचाहिँ भन्छन्, ‘नेपाली फुटबलको स्तर रातारात सुधार्न सकिँदैन । लामो समयको एउटा गतिलो प्रोजेक्ट चाहिन्छ ।’
यस्तो लाग्छ- कुनै चमत्कारले मात्रै नेपाललाई वल्र्डकप खेलाउन सक्छ । अहिलेलाई यति भनेर चित्त बुझाउन सकिएला- संसारमा दुई सयभन्दा बढी देश छन् । तीमध्ये जम्मा ३२ देशले त वल्र्डकप खेलेका हुन् नि ! वल्र्डकप खेल्न नपाउने हामीजस्ता सयौँ देश छन् । बेकारमा किन चिन्ता गर्नु ?
मिस ई-कलेज प्रतियोगितामा भाग लिएका प्रफुल्ला श्रेष्ठ, प्राप्ति खड्का र अस्मिता कँडेल अन्जनका ठूला फ्यान हुन् । मोडेलिङमा कदम राख्न खोजिरहेका यी विद्यार्थीलाई उनको स्टाइलिसनेस असाध्यै आकर्षक लाग्छ । तीनैजनाले अन्जनका केही गेम हेरेका छन् । र, तीनैजनालाई अहिले १०८ डिग्री ज्वरो आएको छ । फुटबलको ज्वरो !
One response to “नेपाली बेकह्याम”
Thapa / Bikram Mr | 29/06/2010 मा 8:40 अपराह्न |
Cheers !!! Anjan,
Remember last time (during 2008) we met at Pokhara along with Raju D’a and Raju Uncle. Keep up your great spirit Buddy.